ဦးနှောက်အခြေခံ: ဆုလာဘ်စနစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူမောင်း | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဦးနှောက်အခြေခံ ဆုလာဘ်စနစ်
ကျနော်တို့အရသာရှိတဲ့အစားအစာ, မတ်ေတာရှိတဲ့ထိတွေ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အရက်, ဘိန်းဖြူ, ညစ်ညမ်း, ချောကလက်, လောင်းကစား, လူမှုရေးမီဒီယာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်, ငါတို့အကျိုးကိုသည့်စနစ်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆုလာဘ်စနစ်က ဦး နှောက်ထဲမှာအရေးအပါဆုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အစားအစာ၊ လိင်၊ အရက်စသည်တို့ကဲ့သို့သောပျော်ရွှင်ဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုများဆီသို့ကျွန်ုပ်တို့၏အမူအကျင့်ကိုမောင်းနှင်သည်။ ၎င်းသည်ပconflictိပက္ခ၊ အိမ်စာစသည်တို့ကဲ့သို့စွမ်းအင်သို့မဟုတ်အားစိုက်ထုတ်မှုများပိုမိုလိုအပ်သောနာကျင်မှုများမှဝေးကွာစေသည်။ amygdalaကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းနှိုးစက်စနစ်။
ဆုလာဘ်စနစ်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ခံစားမှုများကိုခံစားရပြီးလုပ်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်ထိုစိတ်ခံစားမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတွင် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းမှုများပါဝင်သည်။ သူတို့ကအပြုအမူတစ်ခုထပ်လုပ်ရန်၊ တစ် ဦး ကဆုလာဘ်အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ရန်အစာစားချင်စိတ်ကိုမောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အားဖြည့်သူများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မသိသော (သတိမရှိသော) အပြုအမူများကို၎င်းတို့ရှင်သန်ခြင်းအတွက်မကောင်းကျိုးဖြစ်စေသည့်အရာအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်စေသည်။ အပြုအမူအတွက်နာကျင်မှုထက်ပျော်ရွှင်မှုသည် ပိုမို၍ ကောင်းကျိုးသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ မုန်လာဥနီတစ်ချောင်းသည်တုတ်ထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
အကျိုးကိုစနစ်၏အလယ်ဗဟိုမှာဖြစ်ပါတယ် striatum။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏နေရာဒေသဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရ၊ striatum သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီသည့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏ရှုထောင့်မျိုးစုံကိုညှိနှိုင်းသည်။ ၎င်းတို့တွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ၎င်းသည် ဦး နှောက်သည်နာနိုစက္ကန့်အတွင်းလှုံ့ဆော်မှု၏တန်ဖိုးကိုချိန်ဆ။ 'go for it' သို့မဟုတ်အချက်ပြမှုများကိုဆက်လက်ရပ်တန့်ရန်နေရာဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏ဤအပိုင်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ (သို့) ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရောဂါကြောင့်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေသောအလေ့အထများသည် 'ရောဂါဗေဒ' သင်ယူခြင်း၏ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်၏ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးအထောကျအကူအတိုကို TED ဟောပြောပွဲဖြစ်ပါသည် အဆိုပါပျော်ရွှင်မှု Trap.
dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? Dopamine သည် ဦး နှောက်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဆုချီးမြှင့်မှုစနစ်လည်ပတ်ရာဖြစ်တယ်။ ၎င်းတွင်လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ Dopamine သည် go-get-it 'neurochemical ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်ဆုများနှင့်အပြုအမူများကိုမောင်းနှင်သည်။ ဥပမာ၊ အစားအစာ၊ လိင်၊ နှောင်ကြိုး၊ နာကျင်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အချက်ပြလည်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများသည် dopamine အလုံအလောက်မထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ ဤသည်လူရှုပ်လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်တက်ပြသထားတယ်။ ထပ်ခါတလဲလဲ dopamine ၏အစိပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမူအကျင့်တစ်ခုထပ်မံပြုလုပ်လိုသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူလေ့လာပုံ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာ ဦး နှောက်ထဲမှာအလွန်ဂရုတစိုက်မျှမျှတတဖြစ်ပါတယ်။ dopamine ၏အခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်သောအဓိကသီအိုရီမှာ၎င်းဖြစ်သည် မက်လုံးပေး-salience သီအိုရီ။ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလိုချင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိသဘာဝ opioids မှလာသည်။ ခံစားမှုမြင့်မားသည်။ Dopamine နှင့် opioids အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ schizophrenia ရောဂါရှိသူများသည် dopamine ကိုအလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမုန်တိုင်းများနှင့်အလွန်ပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Goldilocks စဉ်းစားပါ။ လက်ကျန်ငွေ အစားအစာ၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်စသည်တို့ကိုစွဲလမ်းခြင်းကထိုလမ်းကြောင်းများကိုအားဖြည့်ပေးပြီးအချို့သူများတွင်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။
ကြိုတင်တစ်ဦးအမူအကျင့်ရန်ဦးနှောက်အားဖြင့်ဖြန့်ချိ dopamine ၏ပမာဏအပျြောအပါးပေးဘို့က၎င်း၏အလားအလာမှအချိုးကျသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပျော်မွေ့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ဖွဲ့စည်းထားသောမှတ်ဉာဏ်ကျွန်တော်နောက်တဖန်ပျြောမှေ့စဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ဆိုလိုသည်။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွချိုးဖောက်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ expectation- ပိုပြီးပျြောမှေ့စဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းဖြစ်ပါတယ် pleasurable- ငါတို့သည်လှုံ့ဆော်မှုကြုံတွေ့ရအတိုင်းလာမယ့်အချိန်ထက်ပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်း dopamine ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးကို system ကိုအပိုင်စီးနှင့်ကနဦး dopamine နဲ့ opioids ၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဦးနှောက်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွရန်အသုံးပြုရရှိမယ့်အချိန်ပြီးနောက်, ဒါကြောင့်မြင့်မားရမယ့် dopamine တိုးတက်မှုပိုမိုလိုအပ်နေပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦးတူညီပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ် porn နှင့်တကွ, ဦးနှောက်မြင့်ရရှိရန်အသစ်ကွဲပြားခြားနားနှင့်ပိုပြီးထိတ်လန်သို့မဟုတ်အံ့သြစရာလိုအပ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ပထမ ဦး ဆုံးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအမြဲတမ်းလိုက်ဖမ်းလေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်စိတ်ပျက်ရလေ့ရှိသည်။ ငါမရနိုင်မှာပါ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး လည်းအချိန်ကြာပြီးနောက် dopamine နိမ့်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသောရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနာကျင်မှု၏ခေါင်းကို ဆက်၍ နေရန်порноသို့မဟုတ်အရက်သို့မဟုတ်စီးကရက်ကို 'လိုအပ်' စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မှီခို၏သံသရာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (သို့) အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမှီခိုနေရသူတစ် ဦး တွင် dopamine အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်သုံးစွဲရန် 'တိုက်တွန်းခြင်း' သည်အသက်ရှင်ခြင်းသို့မဟုတ်သေခြင်း၏ရှင်သန်မှုလိုအပ်ချက်ဟုခံစားရပြီးနာကျင်မှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒီအလယ်ဗဟို ဦး နှောက်inရိယာ (striatum) ရှိ dopamine အဓိကအရင်းအမြစ်ကို ventral tegmental area (VTA) မှာထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ထို့နောက်၎င်းသည်နျူကလိယ accumbens (NAcc)၊ ဆုလာဘ်စင်တာသို့သွားသည်။ ထိုဆုလာဘ်၏မြင်ကွင်း / ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု / မျှော်လင့်ချက်အားတုန့် ပြန်၍ လှုပ်ရှားမှုအတွက်အဆင်သင့်ခလုတ်ကိုတင်သည်။ နောက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု - 'go get it' သို့မဟုတ် excitatory signal ဖြင့်သက်ရောက်သော motor / လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် 'stop' ကဲ့သို့သောတားစီးသော signal ကို၎င်းကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ယူပြီးလျှင် prefrontal cortex မှအချက်ပြတစ်ခုကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဆုပေးစင်တာတွင် dopamine ပိုများလေလေလှုံ့ဆော်မှုကိုဆုလာဘ်တစ်ခုအဖြစ် ပို၍ ခံစားရလေလေဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုများရှိသူများသည်ဆန္ဒသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောလုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးရန် prefrontal cortex မှအချက်ပြလွန်းအားကိုထုတ်လုပ်သည်။
<< Neurochemicals ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက် >>